Vonoan’olona feno habibiana tao Salazamay, Toamasina : norasarasaina, niparitaka ny vatan’ilay vehivavy | NewsMada
Vonoan’olona feno habibiana tao Salazamay, Toamasina : norasarasaina, niparitaka ny vatan’ilay vehivavy
Tombanana ho 20 hatramin’ny 23 taona eo ho eo ity vehivavy hita faty teo Salazamay, Toamasina, omaly maraina ity. Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana, satria norasarasaina, niparitaka tanteraka ny vatany. Tsy hita teo kosa anefa ny foto-peny, ny tendany, ny lelany, ny fivaviany ary ny fony. Halatra taova ?
Nampihoron-koditra ! Fatim-behivavy iray notapatapahina valo no hitan’ny olona tao amin’ny fokontanin’i Salazamay Toamasina, omaly vao maraina, tsy lavitra ny trano fandraisam-bahiny iray goavana. Nampivarahontsana ny nahita ny fatin’ity vehivavy ity satria voatapatapaka sady efa miparitaka ny vatany iray manontolo. Voatery notsimponina ary natambatambatra mihitsy izany. Tsy hita intsony ny foto-peny, tendany, ny lelany, ny fivaviany, ny fony. Navoraky ny dokotera nanao ny fizahana ny tsinainy hatrany amin’ny atiny ka tamin’izany fa tsy tao intsony ny fony.
Efa maty 48 ora mialoha ny nahitana azy ity vehivavy ity, araka ny fandinihana nataon’ny dokotera nandritra ny fizahana ny razana ary nampidirina tao anaty vata fampangatsiahana rehefa avy novonoina. Manaporofo izany rahateo, mangatsiaka be sady misy gilasy ny fatiny tamin’ny fotoana nahitan’ny olona azy. Tsy nahenoana fofona ihany koa ny fatiny.
Tsy vonoan’olona na fanendahana tsotra no andikan’ny mponina ao Toamasina ity vonoan’olona feno habibiana ity fa halatra taova matoa tsy hita intsony ireo taova sasany amin’ity vehivavy niharam-boina ity. Miahiahy ny rehetra fa mety ho irony vehivavy mpanofa vatana sy fahafinaretana amin’ny alina irony ity niharam-boina ity. Tsy mbola nisy naka rahateo ny fatiny ao amin’ny tranom-patin’ny Hopitalibe Toamasina, hatramin’ny omaly.
Mitebiteby ny mponin’i Toamasina…
Tsy milamina intsony i Toamasina tato ho ato momba ny tsy fandriampahalemana. Sokajin’ny rehetra ho renivohitra ara-toekarena iangonan’ny zava-dratsy rehetra i Toamasina manoloana ireny raharaha nafampana niaraha-nahita ireny : fakana an-keriny izay niafara tamin’ny famoizana ain’olona, efa hita tany an-toerana koa ny famonoana vehivavy iray tao Ambalamanasy ka natao tanaty sakaosy iray lehibe ny fatiny mialoha ny nandevenana azy teo an-tokotany, fifanjevoana lava ny ao amin’ny kaominina ao an-drenivohitr’i Toamasina, ny mpitsabo samy mpitsabo sy ny mpitsara samy mpitsara mifandramatra izay miafara amin’ny fifamelezana totohondry, manginy fotsiny ireo olom-panjakana voasaringotra amin’ny raharaka fakana an-keriny sy resaka maloto hafa. Santionany ihany ireo; mitebiteby ny mponin’i Toamasina. Aiza ny tompon’andraikitra voakasika mivantana amin’ity raharaha ity?